Shirkii Garoowe oo Gabba Gaboobay,Sawiro iyo Qodobo | Somaale.com
Shirkii Garoowe oo Gabba Gaboobay,Sawiro iyo Qodobo
Waxaa xalay magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyay Shirkii dastuurka Soomaaliya, iyadoo la isku raacay qodobadii kasoo baxay Shirkaasi.
Saacadu markii ay ahayd kowdii iyo barkii habeenimo ee xalay ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe Shirkii looga hadlayey dastuur u sameenta dalka oo ay yeelanayeen dhinacyada Soomaalida iyo wadamada beesha Caalamka.
Shirkaani ayaa gabagabadiisa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne Shariif, C/raxmaan Faroole, wasiirka diinta dalka Jabuuti, u qaabilsanaha QM ee Soomaaliya Mahiga, Safiirka Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo xubno kale, waxaana Madaxdaasi dhamaantooda ay sheegeen in laga heshiiyay qodobadii laga wada hadlay.
Qodobada la isku raacay ee Shirka Garoowe kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ahaa in meel la isla dhigay arimaha dastuurka, in 4-ta sano ee barlamanka uu yeelan doono 50 xubnood, iyo in 30% haweenka ay ka mid noqdaan barlamanka.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay gabagabadii kulanka ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay ka qeyb galayaasha Shirka ay isku raacaan qodobadii kasoo baxay Shirka, waxaana uu kula dardaarsamay ka qeybgalayaasha in si wanaagsan ay u shaqeeyaan inta laga gudbayo KMG.
Madaxweynaha Shariif ayaa waxa uu sheegay in Shirkaani uu yahay mid wax wayn u tari doono Umada Soomaaliyeed, waxaana wax uu filayey uu ku tilmaamay in la isku raaco qodobada kasoo baxa Shirka.
Duqa Beledweyne oo laxiray kaddib markii uu feeray ku-xigeenkiisa, iligna ka tuuray
JACFAR BIN ABII DHAALIB,AMIIRKII MUHAAJIRIINTII U QAXDAY XABASHA,Baro wanaagiisa 0
Maleeshiyaadka Al shabaab oo lagala wareegay Buulo Xaawo, Baay 0